Mako: toushenne | Martech Zone
Isu tinoda SeanieMic, a parody rapper iyo yaita toni yekunakisa kucheka. Nziyo dzake dzakaita kuti ive nehutachiona pese pawebhu, saka takamukumbira kupfira mutinhimira nezvebhuku redu, Corporate Blogging for Dummies. Seanie akaroverera! Pasina chinhu kunze kopi yakanyorwa mifananidzo yebhuku iri muruoko rwake, takasimudza doro uye mazuva mashoma gare gare takave neunyanzvi! Kana iwe waverenga bhuku racho, iwe uchada izvi…